Abavelisi be-LED abaMhlophe kunye nababoneleli | Umzi mveliso wase China omhlophe we-LED
Ukukhanya okuphezulu kwe-SMD ye-4014
Inkcazo yemveliso I-4014 ye-White LED eyenziweyo kusetyenziswa i-chip eblue kunye ne-phosphor. Inkqubo yokupakisha iteknoloji ye-centrifugal, indawo yokukhanya efanayo, ukusebenza ngokukuko kokuchasana, ngokuhambelana nemigangatho yovavanyo yamazwe e-United States ye-Energy Star; Iphakheji yocingo lwegolide, iimveliso ezinefuthe lobushushu eliphezulu kunye nelisezantsi (-40 ℃ / 30min ~ 125 ℃ / 3omin) imijikelo engama-500 yovavanyo lokuthembeka, ngaphezulu kovavanyo olunokuthenjwa olunamandla ...
I-5050 ye-Bulb ye-LED enokumelana nokushisa okuphezulu
Ingcaciso yeMveliso Lo mthombo wokuKhanya kwe-5050 ye-LED sisixhobo esisebenza ngokusebenza ngamandla esinokuphatha ukuqhuba okuphezulu okufudumeleyo kunye nokuqhuba okuphezulu ngoku. Uluhlu lwepakeji encinci kunye nokuqina okuphezulu kuyenza ukuba ibe lukhetho olufanelekileyo lokukhanya kwepaneli ye-LED, ukukhanya kwebhalbhu ye-LED, ukukhanya kwetyhubhu ye-LED, ukukhanya kwakhona kunye nokunye i-White Power LED iyafumaneka kuluhlu lobushushu bombala ukusuka kwi-3000K ukuya kwi-6500K. Eli candelo liprinta unyawo oluhambelana nobungakanani be-LED efanayo kwimarike yanamhlanje. Ubungakanani: 5.0 x 5.0 ...
2835 Umgangatho ophezulu wokuKhanya kwe-LED
Ingcaciso yeMveliso Lo mthombo wokuKhanya kwe-LED wama-2835 sisixhobo esisebenza ngamandla esisebenza ngombane esinokuphatha ukuqhuba okuphezulu okufudumeleyo kunye nokuqhuba okuphezulu ngoku. Uluhlu lwepakeji encinci kunye nokuqina okuphezulu kuyenza ukuba ibe lukhetho olufanelekileyo lokukhanya kwepaneli ye-LED, ukukhanya kwebhalbhu ye-LED, ukukhanya kwetyhubhu ye-LED, ukukhanya kwakhona kunye nokunye i-White Power LED iyafumaneka kuluhlu lobushushu bombala ukusuka kwi-2600K ukuya kwi-7000K. Eli candelo liprinta unyawo oluhambelana nobungakanani be-LED efanayo kwimarike yanamhlanje. Ubungakanani: 2.8 x 3 ....
Ukukhanya okuphezulu kwe-2835
Ingcaciso yeMveliso Lo mthombo wokuKhanya kwe-LED wama-2835 sisixhobo esisebenza ngamandla esisebenza ngombane esinokuphatha ukuqhuba okuphezulu okufudumeleyo kunye nokuqhuba okuphezulu ngoku. Uluhlu lwepakeji encinci kunye nokuqina okuphezulu kuyenza ukuba ibe lukhetho olufanelekileyo lokukhanya kwepaneli ye-LED, ukukhanya kwebhalbhu ye-LED, ukukhanya kwetyhubhu ye-LED, ukukhanya kwakhona kunye nokunye i-White Power LED iyafumaneka kuluhlu lobushushu bombala ukusuka kwi-2600K ukuya kwi-7000K. Eli candelo liprinta unyawo oluhambelana nobungakanani be-LED efanayo kwimarike yanamhlanje. Ubungakanani: 2.8 x ...